Canada oo ka walaacsan Qaxootiga la filayay oo hoos u dhacay Sanadkan Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaCanada oo ka walaacsan Qaxootiga la filayay oo hoos u dhacay Sanadkan
Canada oo ka walaacsan Qaxootiga la filayay oo hoos u dhacay Sanadkan
September 16, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Hoos u dhac ayaa ku yimid soogalootiga Kanada bishii Luulyo si aad iyo aad ah, taas oo ka tarjumeysa saameynta xuduudaha xiran iyo muujinta halista hoos u dhaca dhaqaalaha.
Xogta ugu dambeysay ee dowladda waxay muujineysaa in Kanada ay aqbashay 13,645 degganaaho rasmi ah bishii Luulyo, taasoo hoos uga dhacday 63% isla muddadii la soo dhaafay ee xayiraadaha safarka ee Covid-19 ay sii socdaan. Tirooyinka bisha Luulyo waxay la jaan qaadayaan ku dhowaad saddex-meelood laba meelood inta u dhexeysa Abriil iyo Juun, iyagoo biyo qabow ku shubaya rajada laga qabo soo kabashada degdegga ah.
Socdaalku wuxuu kamid ahaa waxyaabihii hormariyey kobaca dhaqaalaha Kanada kahor faafida, Wasiirka socdaalka Marco Mendicino ayaa shaaca ka qaaday bartilmaameedkooda bishii Maarso oo gaaraya 341,000 oo deganaansho rasmi ah sanadkan, laakiin toddobadii bilood ee ugu horreysay kaliya 34% tiradaas ayaa la siiyay ogolaansho.
Hoos u dhaca Socdaalka ayaa culeys ku keeni kara suuqyada guryaha magaalooyinka wuxuuna sababi karaa hoos u dhigidda maalgelinta hay’adaha dugsiga sare , RBC ayaa ku sheegtay warbixin bishii la soo dhaafay. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa hal-abuurnimada.
Oggolaanshaha waxbarasho ayaa muujinaya isbeddel la mid ah. Bishii Luulyo, Kanada waxay soo saartay 13,455 oggolaansho cusub oo daraasad ah, taasoo ka hooseysa 59% halkii ay ka ahayd 32,540 isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay.
Dowlada Kanada ayaa dhibaato iyo Culees u aragta hoos u dhaca ku yimid Tirada soo galootiga laga filayay Dalka.